1 Tantara 8 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865]
[Ny amin'ny taranak'i Benjamina sy ny firazanan'i Saoly] Ary Benjamina niteraka an'i Bela, lahimatoa, sy Asbela, lahiaivo, sy Ahara, fahatelo,
sy Noha, fahefatra, ary Rafa, faralahy.
Ary ny zanakalahin'i Bela dia Adara sy Gera sy Abihoda
sy Abisoa sy Namana sy Ahoa
sy Gera sy Sefofana ary Horama.
Ary izao no zanakalahin'i Ehoda (izao no lohan'ny fianakavian'ny mponina any Geba; ary nitondra azy ho babo tany Manahata,
Namana sy Ahia ary Gera; izy no nitondra azy ho babo), niteraka an'i Oza sy Ahihoda izy.
Ary Saharaima niteraka tao amin'ny tany Moaba taorian'ny nisaorany an'i Hosima sy Bara vadiny.
Ary Hodesy vadiny no niterahany an'i Jobaba sy Ziba sy Mesa sy Malkama
sy Jeoza sy Sakia ary Mirma. Ireo no zananilahy, samy lohan'ny fianakaviany avy.
Ary Hosima no niterahany an'i Abitoba sy Elpala.
Ary ny zanakalahin'i Elpala dia Ebera sy Misama ary Samera, izay nanorina an'i Ono sy Loda sy ny zana-bohiny;
Beria koa sy Sema, izay lohan'ny fianakavian'ny mponina ao Aialona sady nandroaka ny mponina tao Gata;
ary Ahio sy Sasaka sy Jeremota
sy Zebadia sy Arada sy Adera
sy Mikaela sy Jispa sy Joha (zanakalahin'i Beria ireo),
ary Zebadia sy Mesolama sy Hizky sy Hebera
sy Jismeray sy Jizlia sy Jobaba (zanakalahin'i Elpala ireo),
ary Jakima sy Zikry sy Zabdy
sy Elienay sy Ziletahy sy Eliala
sy Adaia sy Beraia sy Simrata (zanakalahin'i Simey ireo),
ary Jispana sy Hebera sy Eliala
sy Abdona sy Zikry sy Hanana
sy Hanania sy Elama sy Antotia
sy Jifdia sy Penoela (zanakalahin'i Sasaka ireo),
ary Samseray sy Seharia sy Atalia
sy Jaresia sy Elia sy Zitry (zanakalahin'i Jerohama ireo).
Ireo no lohan'ny fianakaviany araka ny firazanany, dia samy loholona. Ireo no nonina tany Jerosalema.
ary Abdona no lahimatoany, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nadaba,
dia Gedora, dia Ahio, dia Zakera.
Ary Miklota niteraka an'i Simea. Ireo koa dia niara-nonina tamin'ny rahalahiny tany Jerosalema nifanandrify fonenana taminy.
Ary ny zanakalahin'i Jonatana dia Meribala; ary Meribala niteraka an'i Mika.
Ary ny zanakalahin'i Mika dia Pitona sy Maleka sy Tarea ary Ahaza.
Ary Ahaza niteraka an'i Joada; ary Joada niteraka an'i Alemeta sy Azmaveta ary Zimry; ary Zimry niteraka an'i Moza;
ary Moza niteraka an'i Binea; Rafa no zanakalahin'i Binea, Elasa no zanakalahin'i Rafa, Azela no zanakalahin'i Elasa
Ary Azela nanana zanaka enina mirahalahy, ka izao no anarany: Azrikama sy Bokero sy Isimaela sy Searia sy Obadia ary Hanana. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Azela.
Ary ny zanakalahin'i Eseka rahalahiny dia Olama, lahimatoa, sy Jeosy, lahiaivo, ary Elifeleta, faralahy.Ary ny zanakalahin'i Olama dia lehilahy mahery sady mpandefa zana-tsipìka, ary nanana zanakalahy sy zafy maro izy, dia dimam-polo amby zato. Ireo rehetra ireo no taranak'i Benjamina.
Ary ny zanakalahin'i Olama dia lehilahy mahery sady mpandefa zana-tsipìka, ary nanana zanakalahy sy zafy maro izy, dia dimam-polo amby zato. Ireo rehetra ireo no taranak'i Benjamina.